BWA011-DS01 - 10 Isiteshi Sokumisa Port | Izixazululo ze-OMG
I-BWA011-DS01 - 10 Isiteshi Sokumisa Port
1.Isakhiwo sonke sensimbi, siqinile futhi sinzima;
Ihambisana ngokuphelele ne-USB2 ne-USB1.1, i-hotswappable yokusekela, iyahambisana namakhamera amaningi agugile omzimba.
3.Ngokuvikelwa okubili kokukhiphayo, kungavikela idivayisi yakho exhunywe ekulayisheni ngokweqile, ukusekela ukulayishwa kwamandla kagesi nokuvikelwa kwamanje okuzenzakalelayo; imbobo ngayinye inikeza kuze kube ngu-2.0A yamanje.
Isiqeshana serekhoda se-4 singalungiswa ezindaweni eziyishumi, ezihlelwe kahle.
Iziteshi ze-5.Docking station, i-motherboard yangaphakathi ifakwe nge-fan. Ukuvimbela esikhathini sokuphumula ngenxa yokushisa okukhulu.
6. Ifakwe iswishi, engacisha ngqo amandla ayisishiyagalombili e-USB.
7. Ukusekelwa yeWindows 10;
umsebenzi: Ukushaja kwamakhamera amaningi nokulayishwa kwedatha
Inani eliphezulu lokuxhumeka: 10
Voltage echwebeni ngalinye: 5V
Ubuningi bamanje bechweba ngalinye: I-2.0 A, esebenza ngokuhambisana namadivayisi axhunyiwe
Amandla wokufaka aphezulu: 120W
Usayizi weNet: 40cm x 30cm x 10cm
Isisindo sengqikithi: 8Kg
I-BWA011-DS01 - 10 Isiteshi Sokumisa Port igcine ukuguqulwa: Agasti 18th, i-2020 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-2332 Ukubuka kwe-3 Namuhla